Ho an'ny taxi be ohatra dia 50.000 ar isan'andro raha kely ny vola votsotra tokony hampidirin'izy ireny any amin'ny mpampiasa azy raha tapaka 15 andro ny karaman'ireo mpamily sy ny mpanampy azy ho an'ireo mandray isam-bolana. Ho an'ireo miantehitra amin'ny kely azo ambonin'ny versement kosa dia efa tapaka sotro fihinanana nanomboka ny alatsinainy teo mitanin'andro sy lanin'ny adin-tsaina fotsiny miandry izay mety ho tohiny. Tsy misy hafa amin'izay ny taxi na fiara karetsaka izay mamelona ankohonana maro ihany koa ary manenjika versement 15.000 ar isan'andro raha kely saingy tsy afaka. Nomarihina filohana koperativa iray moa fa raha mitohy izao dia ny hanohanana no mety hahafaty ny gasy. Tsiahivina fa miisa 3500 ireo taxi be ato an-drenivohitra.mivondrona anaty koperativa 40 latsaka, mitrandraka zotra maherin'ny 70 isa.